AKW HKWỌ HOODOO
1619: E wetara ndị Africa America mbụ na Britain North America.
1692: Emere anwansi anakpo African American na Salem Witchcraft Scare.
1718: New Orleans hiwere.
1808: United States mechiri ahịa ohu ohu mba ụwa.
1849: Ihe mbu eji okwu bu "hoodoo" na mbipụta mere.
1865: A kwụsịrị ịgba ohu na United States.
1881: Marie Laveau nwụrụ.
1890s: shopslọ ahịa ọkọnọ Hoodoo nke arụ ọrụ n'obodo nwere nnukwu obodo ndị America.
1899: Charles Waddell Chesnutt's Nwanyị Conjure, nke bụ
edere mbu na oru hoodoo.
1918: Caroline Dye nwụrụ.
1931: Zora Neale Hurston bu “Hoodoo in America,” oru izizi emere hoodoo dika ihe di mma banyere obodo Amerika,
1935: Zora Neale Hurston's Lesmụ Nle na Menmụ nwoke e bipụtara.
1947: Dr. Buzzard nwụrụ.
1962: James Spurgeon Jordan nwụrụ.
1970-1978: Harry Middle Hyatt's Hoodoo — Conjuration — chta Amoosu — Mgbalị e bipụtara.
Hoodoo enweghị mmalite doro anya. Akwụkwọ ntụpọ mbụ edere banyere hoodoo pụtara na 1849 n'otu akwụkwọ akụkọ Natchez, akwụkwọ akụkọ Mississippi, na ọtụtụ ihe ndị ọzọ kwuru banyere okwu ahụ gbadoro ụkwụ na ndagwurugwu Mississippi ruo narị afọ nke iri na itoolu. Okwu ahụ n'onwe ya nwere ike ịbụ nke agbụrụ Ọdịda Anyanwụ Africa ma eleghị anya sitere na mpaghara ala Bight of Benin, nke bụkwa ebe okwu ahụ sitere. "Voodoo." Na foto dị ugbu a, ha abụọ dịcha iche, n'agbanyeghị hoodoo na-ezo aka na anwansi anwansi nke American American ebe Voodoo na-akọwapụta ụdị okpukpe Diasporic nke Africa ozugbo achọpụtara na Ndagwurugwu Mississippi. Tupu 1950s, okwu ndị a nwere njikọ chiri anya karị. Onye ode akwukwo George Washington Cable, kowara hoodoo dika okwu ndi ndi America America kpọrọ omume ndi ọcha ana-akpo Voodoo. N’ezie, edemede 1849 nke bu ụzọ webata hoodoo nye ndị na-agụ ya ji okwu ahụ kọwaa okpukperechi.
Ọ bụ ezie na usoro hoodoo edo edoghị anya, ọ nwere ike bụrụ na o sitere n'otu n'ime asụsụ ndị a na-agagharị agagharị na mpaghara nke mpaghara. Otu ihe ga - ekwe omume bụ mkpụrụ Okwu “hu” na “ime,” nke ga-apụta ọnụ "ọrụ mmụọ." Ihe omuma ya di omimi, site na nmalite ala iri-abuo nke iri-abuo, hoodoo aburula otu okwu eji amara nke oma n’obodo Afrikan Diasporic (Anderson 2008: ix, 42-3; Cable 1886: 815). Na mpụga Ndagwurugwu Mississippi, ihe a maara ugbu a dị ka hoodoo site na aha dịgasị iche iche, gụnyere mojo, aghụghọ, ọrụ, aghụghọ, na ọtụtụ ndị na-ejikarị egwu. Ọ bụ ezie na okwu izizi nwere ike sitere na West Central Africa, ndị ọzọ bụ asụsụ Bekee. Conjure, emere ya dika okwu ya na ngwaa nke ndi n’eji ihe ya na ndi ahia ha, ebuputara ya na oru igba mmuo (Anderson 2005: 28, 57).
Na colonial nke North America na emesịa na United States, ọdịnala dị iche iche nke Africa jikọtara ọnụ na mmegharị site na ọdịbendị Europe na nke Ndị America Ọdịbendị Ha zutere. Ka ọ na-erule n'oge antebellum, ndị ohu na-ata ata site na galangal ma fesaa ihe ọ juiceụ towardụ ahụ n'ebe ndịnwe iji chebe onwe ha pụọ ​​na mmegbu, omume a na-esite na West Central Africa. Na Ndagwurugwu Osimiri Mississippi, ndị kwere ekwe nọ na Voodoo kpọkuru chi ndị sitere na Bight nke Benin mpaghara West Africa ka ha na-eme anwansi. N'otu oge ahụ, ọtụtụ abịawo webata Bible na ndị nsọ nke Kraist na nkwenkwe na usoro iwu nke mmụọ ha karịrị nke mmadụ. N’otu aka ahụ, ịkpọtụrụ ndị Native America gosipụtara ha ihe ọhụrụ ha webatara n’ime omume ha, gụnyere amaranth iji dọta ịhụnanya na puccoon maka ezigbo akụ (Anderson 2005: 30-1, 39, 56-60, 68-72).
Tupu ngwụsị nke narị afọ nke iri na itoolu, hoodoo bụ ngalaba nke ndị na - anọkarị, ndị a na - akpọkarị hoodoo dọkịta, ụmụ nwoke ma ọ bụ ụmụ nwanyị na - ejide nwoke, ma ọ bụ isi abụọ, na - ere ndị ahịa ihe na ọrụ karịrị nke mmadụ. Ntughari nke Conjurers buru ezigbo ibu. Gba oke na imepụta ọtụmọkpọ iji dọta chi, ịhụnanya, na ihe ndị yiri ya bụ oge niile n'ọrụ ha. Ọtụtụ na-ekwu na ha nwere ikike imerụ ndị iro ndị ahịa ha nke ọma na ịgwọ ndị merụrụ arụ dị otú ahụ. Tupu ịmalite, ndị na-eme hoodoo kpụkọtara ihe ndị emere iji nyere aka gbapuo ohu gbapụ ma nyekwa ndị kwere ekwe otu esi eji mgbọrọgwụ na ntụpọ ime mmụọ na-echebe onwe ha pụọ ​​na obi ọjọọ nke ndị isi na ndị nlekọta. Na nnwere onwe bịara gbasawanye banyere ntụgharị nke conjure. Amulet mere iji dọta ọrụ na ego abawanyela. Kama nchedo nke ndị nwe ya, ndị na-ahụ maka hoodoo kwere nkwa ịgbachitere ndị ahịa site na usoro ikpe nke oge Jim Crow, bụ nke ama ama ama megide ndị America America na-ebo ebubo mpụ (Anderson 2005: 79-87, 100-03; Long 2001: 99- 161- XNUMX).
Ka narị afọ nke iri na itoolu na-abịaru nso, hoodoo amalitelarị ịgbanwe. Ọ bụ ezie na ndị na-amụ naanị ihe, ndị chịkọtara akụrụngwa ha site n'okike, anaghị ala n'iyi, ha na-ahụwanye onwe ha na asọmpi nke ụlọ ọrụ ọkọnọ mmụọ. Botlọ a na-enweta ọgwụ ndị a na-egwu mmiri ghọrọ ebe a na-esi achọ ịmata ihe, na ndị na-emepụta akwụkwọ ime mmụọ na nke anwansi erererịrị ndị America America. N'oge na-adịghị anya, ụlọ ọrụ raara onwe ha nye mmepụta nke American American ikike karịrị nke mmadụ pụtara. Ọ bụ ezie na usoro ngwaahịa ha gụnyere ihe ndị na-eme n’ọhịa n’oge gara aga (ma ọ bụ na-eitomi ya), ha bịara nwekwuo ike n’ọkụ, mmanụ, na ngwongwo ndị ọzọ isi ha na ihe ọdịnala dị n’aha na-akọwapụta ihe ọdịnala dịka nku cat cat na John Onye mmeri. N'akụkụ, ndị nrụpụta ahụ mepụtara ọtụtụ ụlọ ahịa ọkọnọ nke mmụọ, nke pụtara n'obodo ndị nwere nnukwu ọnụ ọgụgụ ndị American American. N'otu oge ahụ, rute ụlọ ahịa na ndị na-emepụta ya, yana ndị na-agba ndị mmadụ n'otu n'otu, na-agbasawanye na uto nke akwụkwọ akụkọ ndị American American dị ka Onye na-agbachitere Chicago na-ebu mgbasa ozi maka ngwaahịa ha, nke enwere ike inweta site na ntanetị n'ụzọ dị mma. Ka ọ na-erule narị afọ nke iri abụọ, ọtụtụ nabatarala manyntanetị dịka ngwa ahịa ọrịre na azụmaahịa ọhụụ (Anderson 2005: 115-29, 131-32).
Dị ka ọ na-ahụkarị na usoro anwansi, na obi nke hoodoo bụ ụkpụrụ nke obi ọmịiko na ịgagharị agagharị. Ọrịa ọmịiko, na ọnọdụ mmụọ karịrị nke mmadụ, na-ezo aka n'echiche ahụ bụ na ihe ma ọ bụ ihe na-ekerịta akụrụngwa nwere ike imetụta ibe ha n'ụzọ ime mmụọ (Anderson 2005: 55). Maka ọtụtụ hoodoo usoro, ihe ọmịiko ha juru ebe niile. Ọmụmụ ihe nyocha kachasị nke ihe owuwu a na-egosi na ọ bụ onye isi ala America, Michael Edward Bell Ternkpụrụ, Structure, na Logic na Afro-American Hoodoo Performance, na-ekwupụta banyere ọmịiko zuru oke na -eme ihe ọchị, nke a na-akpọkarị aka site na ndị na-eme ihe na ndị ahịa ha. Dịka Bell siri kọwaa, ihe ndị a na-ejikarị aka iji wee nweta ego bụ ebe obibi, ihe ndọta bụ nke na-eme eme. Echiche bụ́ isi dị na ya bụ na akụ na-adọrọ mmasị nke ụlọ obibi ahụ ga-adọtara ego n'aka onye ji ya. N’otu aka ahu, igba aka di iche iche mere ka nsogbu gha ma obu ihe nlere nye ndi nwesiri nwere ike choo hoodoo dọkịta ma obu onye ahia gi mewaa amara ma obu juo ya ihu (1980: 212, 254).
Ofkpụrụ nke ịgagharị, ka ọ dị ugbu a, bụ nkwenye na ihe dị otu mgbe na -aga na-aga n'ihu na-emetụta ibe ha ọbụlagodi na ha anọkọghị ọnụ (Anderson 2005: 103). Kpụrụ a kacha arụ ọrụ na ngwa n'ime ihe ndị ahụ gụnyere ihe ndị ejikọtara ya na ndị rụrụ ya na-ezube inyere ma ọ bụ imerụ ahụ aka. Iji maa atụ, Harry Middleton Hyatt dekọtara asịrị edere iji gbuo nke chọrọ ka onye mgbapu ahụ nweta ego ọ ga-eji nweta uwe. N'otu oge onye rụrụ ya ga-eji ihe kpuchie iberibe ili ahụ, kechie ya na paịpụ na-eji ụzọ atọ, were ya jiri obe kechie ya ma lie ya. Ihe onyoonyo putara ihe di nkpa na nkwuputa ahu na nkwenye na akwa n’otu mgbe mmadu na emechu onwe ya nsogbu gara n’ihu inwe ike ime ihe metutara ya aka (Hyatt 1970 - 8: 1976)
N’ikwe n’aka, ọmịiko na mgbaghara na-arụkọ ọrụ oge niile. N’otu usoro ọgwụgwọ ọdịnala nke onye akụkọ ọdịnala Harry Middleton Hyatt dere, otu onye hoodoo na-arụ ọrụ kọwara etu esi agwọ onwe onye ọrịa site n’inye ya onye ọzọ n’eleghị anya. Iji mee nke a, mmadụ ga-enwetara nwa bebi, jiri ọmịiko na-anọchite anya onye ahụ ọrịa. Mgbe ahụ, mmadụ kwesịrị iji nwa bebi ahụ chọọ mma, na-ekekọta otu eriri maka oge ọ bụla onye ahụ nwere nsogbu ahụ, site na ọmịiko ma na-efe efe na-ejikọta nwa bebi ahụ. N’ikpeazụ, mmadụ kwesịrị ịhapụ ihe ụmụaka ji egwuri egwu n’ebe ọ nwere ike iburu ya, bufee nwa bebi ahụ yana ọrịa ahụ kegide ya n’aka onye n’amaghị ama (Hyatt 1970-8: 398-99).
Principleskpụrụ nke ọmịiko na ntụgharị abụghị naanị ike dị na ọrụ hoodoo. Kama nke ahụ, ndị na-ere ahịa na ndị ahịa ha jigidere na mmụọ na ike ime mmụọ na-akwado ma sonye na ọrụ ike karịrị nke mmadụ (Long 2001: 6). Na Ndagwurugwu Osimiri Mississippi, ebe hoodoo na-abụkarị akụkụ nke okpukpe Voodoo, chi dị iche iche na ndị nsọ Katọlik nyeere ndị na-eme egwuregwu aka. Na mpụga mpaghara ahụ, ndị na - eme o yikarịrị ka hà lere anya na Onye Kraịst Chineke bụ isi iyi nke ike ha. N’ebe abụọ ahụ, mmụọ nke ndị nwụrụ anwụ dị ezigbo mkpa.
Otu n'ime ihe ndị a na-ahụkarị na ọgwụ ike na akwa bụ ili ozu, ụzọ iji tinye ihe na-efe efe metụtara onye ahụ nwụrụ anwụ n'ememe mmụọ. Ihe ndi ozo di iche-iche mara aha ha. Otu ihe atụ pụtara ama bụ mkpọrọgwụ John John Onye mmeri, nke bụ isi iyi nke ike maka ọtụtụ ọkwa edepụtara iji rụpụta ezi ihe. Ọkpụkpụ isi ojii, ka amaara ama ama dị ka ụzọ isi nweta nnabata (Anderson 2005: 100-01, 105).
Na mgbakwunye na iziga ike nke mmụọ, ụdị mmadụ ma ọ bụ ike ndị a sị na ha bụ ịgba mara mma nke ndị na-eme ihe na-eme. Dịka ọmụmaatụ, Ruth Bass, onye edemede nke “Mojo: Stkọ Anwansi nke Na-arụ Ọrụ na Ndịda Taa,” kwusiri ike na ahụmịhe ya, ndị na-eme hoodoo (nke onye edemede ahụ kwuru na ọ bụ ya) kwenyere na ihe anụ ahụ niile nwere mmụọ mmụọ (1930) : 87-88). N’uche dị otu a, isi ihe dị n’etiti amulet na ihe a na-eme kwa ụbọchị bụ na ndị na - arụ ọrụ nkwupụta ikike ịchịkwa ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ ịchịkwa mmụọ na - eso onye mbụ, iji ya mee ihe ọma ma ọ bụ ọrịa dabere n’ọchịchọ ndị ahịa na ihe ọmịiko na akwara na-efe efe. nke ihe eji eme ya. Ọ bụ ezie na ndị nchọpụta ole na ole edekọwo nkọwa ndị doro anya na-akọwa echiche a bụ isi, a na-egosipụta ya site na omume a na-enye nri na-egbu egbu na mmanya ma ọ bụ ihe ọ otherụ otherụ ndị ọzọ, omume ọtụtụ ndị na-ewere na ọ dị mkpa ka ihe ndị ahụ dịgide (Anderson 2005: 100-01) .
Usoro a hoodoo kapịrị ọnụ nwere ike ịdị iche n'ọhịa. Dabere n'ụdị ọrụ enyere, usoro ahụ nwere ike ịdị nfe site na iji ọrụ mgbaasị na -emepụta usoro sara mbara, ebumnuche nke nwere ike ịbụ ihe ọ bụla site na ime ka mmadụ nwee mmeri n'ịhụnanya rue igbu onye iro. Lyingkpụrụ dị omimi nke ọmịiko na mmesapụ, ya na enyemaka nke mmụọ nke ụwa nyere ntọala ahụ. Howeverkpo ọbụbụ ọnụ, na-agbaso usoro multistep. Nke mbu, dibia hoodoo gha choputa nsogbu a n’ikpeputa ma nsogbu nke onye oru a sitere n'okike ma obu nke ike. Ọ bụrụ na nke ikpeazụ, conjurer ga-ekpebi onye kpatara nsogbu ahụ. Ihe sochirinụ ọgwụgwọ ahụ bụ nke malitere site na onye na-amụ ya ịchọta na iwepu isi mmalite ihe mmerụ ahụ, bụ nke na-ewerekarị ụdị anụ ahụ zoro ezo n'ụlọ ma ọ bụ n'akụkụ ụlọ onye ahụ metụtara. Iji mezue ọgwụgwọ ahụ, dọkịta hoodoo ga-ewepụ ihe mgbaàmà nke ọbụbụ ọnụ ka onye ahụ metụtara nwee ike ịlaghachi ahụ ike. N’ikpeazu, n’ọtụtụ oge, nwoke ma ọ bụ nwanyị ahụ conjure ga-emegharị onye na-atụgharị ya, na-ekpe ikpe ziri ezi na ihe ọjọọ nke a (Bacon 1895: 210-11; Anderson 2005: 102).
Enwere ike ịchọta ezigbo atụ nke usoro zuru ezu na Harry Middleton Hyatt's, Hoodoo-Conjuration-chta amoosu-Rootwork, nke isiokwu ya bụ “Gwa ya ihe ọ ga-eme iji chighachi ya.” N'okwu a, otu nwoke nwee ọnya nkwonkwo ụkwụ nke mere ka ọ sie ike ije ije. Mgbe dọkịta dọkịta enweghị ike inyere ya aka, ọ gara ihe onye gwara Hyatt kpọrọ “amoosu.” Mgbe ndenye ọgwụ nke kwesiri ịsacha ọnya na mmamịrị na nnu mechisịrị, onye njikwa ahụ gwara onye ahịa ya na nsogbu ahụ karịrị nke mmadụ, ma nyekwa ya ihe site na iji ihe wee dọba n'akụkụ ihe ndina onye ahụ. Nwoke ahụ lọtara ụlọ, le anya n'okpuru ihe ndina ya, ma wepu akpa ọcha na-adịghị ọcha nke a na-etinye ma kegide obere bọọlụ ise na karama isi. Onye a tara ahụhụ kutere nwoke ahụ hoodoo, onye na-akpọ ya ọkụ. N'oge ụfọdụ n'ime usoro ahụ, onye na-eme ọgwụ ahụ nyekwara onye ahịa ya ọgwụ, nke na-agwọ ọnya ahụ n'onwe ya. Mgbe aja a gwara onye conjurer ka ọ chighari onye mere ya ihe ọ chọrọ, o weghị aka ya, mana ọ gwara onye ahịa ya otu esi eme ya. N'okwu a, onye na-abọ ọbọ ga-etinye ụfọdụ aka ya n'ime ite galọn ma lie ya n'ụzọ onye iro ya jere. Nwoke ahụ mere nke ahụ, mechara chọpụta na onye merụrụ ya ahụ mechara nwee ọnya isi na nkwonkwo ụkwụ ya (Hyatt 1970-1978: 334).
Ka ụlọ ahịa na-enye ihe nke mmụọ bịara bụrụ ihe dị mkpa na ndị ahịa ji nwayọ gbanwee ghọọ ndị ahịa, omume hoodoo ji nwayọọ nwayọọ na-abata na-elekwasị anya na onye na-achọ enyemaka karịrị nke ọkachamara conjurer. N'ọnọdụ ụfọdụ, ndị odeakwụkwọ ụlọ ahịa nọchiri ebe ndị na-eme conjurers, na-atụ aro usoro dị iche iche, mmanụ, ihe omume, amaokwu Bible, na ihe ndị ọzọ na usoro ndị mmadụ kwesịrị iso iji nweta ikike ha. N’aka ndị ọzọ, otu esi agụ akwụkwọ, dịka Ndụ na ọrụ nke Marie Laveau or Akwụkwọ Master nke Candle Ọkụ, ndị ahịa kacha nso wee nwee mmekọrịta. Laa azụ na narị afọ nke iri na itoolu, akwụkwọ ikike nyere ndị ahịa aka inweta ụdị ederede ahụ n'ebughị ụzọ tinye ụkwụ na ụlọ ahịa. Na nkenke, maka ọtụtụ ndị ọrụ, hoodoo ejirila nwayọ ghọrọ omume onwe ya (Long 2001: 99-126; Anderson 2005: 112, 117-22)
Hoodoo enwetụbeghị ụdị ndị ndu iwu mmadụ na-ahụ n'okpukpe. Kama, onye bụ onye ama ama n’ime ihe omume ahụ na-abụkarị ọganiihu onye na-eme ya. Tupu ngwụsị narị afọ nke iri na itoolu, mmekọrịta dị n'etiti conjurers na ndị chọrọ enyemaka ha ka akachasị akọwa ya na nke dị n'etiti ọkachamara na onye ahịa. Ndị mmadụ na-achọ enyemaka karịrị nke mmadụ gakwuuru ndị ọrụ ahụ ha kwenyere na ha nwere ike igbo mkpa ma ọ bụ ọchịchọ ha. Onye na - ahụ maka hoodoo ga - arụ ọrụ Chukwu, nye ọgwụ, ma ọ bụ nyepụta ọtụmọkpọ ma ọ bụ ọgwụ edobere iji rụpụta nsonaazụ achọrọ. [Ihe osise dị n'aka nri] wouldfọdụ ga-arụ ọrụ n'otu akụkụ, dịka ịgba afa, ebe ndị ọzọ na-ekwu na ha nwere ikike ịme akụkụ niile. Na agbanyeghị otu ha si arụ ọrụ ma ọ bụ sie ike, ha natara ụgwọ maka ọrụ ha (Anderson 2005: 86-87, 101-03).
Ndị na-eme ọrụ sitere na ike ha sitere na ike karịrị nke mmadụ n'ụzọ dịgasị iche iche. Na ndagwurugwu Mississippi, nnabata bụ otu ụzọ esi abanye ọrụ a. Ọ bụrụ na mpụga nke mpaghara ahụ, ịbụ onye hoodoo ọkachamara nke a abụghị ọrụ ya. Otutu kwuru na ikike nke conjure bu onyinye (ma obu oge nkpagbu) sitere na Chukwu ma obu ike ndi ozo. Mgbe ụdị ihe a mere, ihe iriba ama na - esokarị ike dị etu a. Otu n’ime ihe ngosi ndị a na-ahụkarị bụ ndị amụrụ site na nwa nwoke ma ọ bụ ịbụ nwa nwoke nke asaa nwa nwoke nke asaa. Anzọ ọzọ a na-ahụkarị maka inweta ike karịrị nke mmadụ bụ site n'inweta. Dịka ọmụmaatụ tutu amụọ na Africa bụ ihe ngosipụta nke ike nke mmụọ. Site na ndi nna ochie ndi meruru ahu bu uzo ozo nke ekwuputara n’elu igwe nke ekwuputara ebe obu na mgbe ogwugwu nke iri-na iteghete ma eleghi anya. Onye ama ama ama ọhụụ nke New Orleans Voodoo Marie Laveau dị ka a na-atụ anya si nyefee ma ọ dịkarịa ala otu n'ime ụmụ ya. Dr. Buzzard, onye dibia ama ama nke South Carolina hoodoo, nyefere nwunye nwa ya nwoke omume (Anderson 2005: 45-47, 96-100).
Tupu narị afọ nke iri abụọ, ọtụtụ ndị na-eme hoodoo bụ ndị American American, ma na ịrị elu nke ụlọ ahịa ọkọnọ nke mmụọ, ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu na-abanye n'ụdị hoodoo ọhụrụ ahụ. Onye ama ama ama na ụlọ ahịa ọkọnọ a na-enweta ebe nri, New Orleans 'Cracker Jack Drugstore, dịka ọmụmaatụ, bụ onye ọcha sitere na agbụrụ ndị Belgium (Long 2014: 67). Amalite na mmalite narị afọ nke iri abụọ, ọtụtụ ndị nwe ụlọ ahịa bụ ndị Juu bụ ndị kwabatara n'oge na-adịbeghị anya bụ ndị tụgharịrị na ire ngwaahịa hoodoo dị ka ụzọ isi nweta ihe ga-ezute n'oge ọha mmadụ mara na ha abụghị ndị nwe ya, ya mere kwesịrị ịkpa ókè (Anderson 2005: 117- 19). N'oge na-adịbeghị anya, ndị ahịa azụmaahịa sitere na Latin America abụrụwo ndị a ma ama dị ka ụlọ ahịa na-enyefe ndị na-eme Latin
Okpukpe America dika Santería abatala okpukpu abụọ dika hoodoo ụlọ ahịa, yana nnukwu ihe atụ bụ ụlọ ahịa F na F Bontanical na Candle nke New Orleans (Long 2001: 70; Anderson 2005: 144-46). [Foto dị na aka nri]
N'agbanyeghị agbụrụ ha na agbanyeghị ma ha na-arụ ọrụ na ọkachamara-ahịa ma ọ bụ dị ka ahịa na-ere ndị ahịa ngwongwo ime mmụọ, ndị hoodoo hụrụ ọrụ ha dị ka ọrụ na-enye ezigbo ego. Ọmụmaatụ, Marie Laveau, ọ bụ ezie na ọ bụghị ọgaranya, ọ dị mma ịme maka nwanyị Africa America nke oge ya, ọbụlagodi inwe ego zuru oke iji nwee ndị ohu mgbe ụfọdụ (Long 2006: 72-8). Ihe kariri otu ọgbọ mgbe e mesịrị, Caroline Dye, nwanyị a ma ama na Newport, Arkansas, nwụrụ na nwanyị bara ọgaranya (Wolf 1969). Otú ahụ ka ọ dịkwa Jim Jordan, otu n’ime ndị dọkịta kacha mara amara e nyere hoodoo. Uru sitere na omume ya nyere ya ohere ịzụta ọtụtụ ugbo, chọta ụlọ ọrụ na-egbu osisi, na ịzụ ịnyịnya (Wolf 1969: 117-21).
Na mgbakwunye na ụgwọ ego, hoodoo nyere ndị na-eme ọrụ ike n'ụdị ndị ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, ndị dọkịta hoodoo nwere aha ọma maka ihe ịga nke ọma nwere mmetụta dị ukwuu n'ahụ ndị ahụ na-asọpụrụ ma na-atụkarị egwu ha. Ọtụtụ mgbe, ikerekeke nke conjurers na-emetụta mmadụ ibe ya. Somefọdụ, gụnyere ndị na-emegide mgbochi ọdịnihu Frederick Douglass na Henry Bibb, tụgharịrị na hoodoo dịka ụzọ iji guzogide ịgba ohu site na ịgbanahụ ntaramahụhụ. Ndị ọzọ tụgharịrị na ndị ọrụ nwere ike karịrị nke mmadụ dịka ụzọ iji nye ha ikike ịchịkwa akụkụ ụwa nke ndụ ha na-agaghị abụ ihe jọrọ njọ na ndị isi ha. Ole na ole gara-aga karịa ụdị mmetụta otu-otu. Onye omuma atu bu Gullah Jack, onye n’eto ulo hoodoo na onye oru Denmark Vesey n’onye nkata nke 1822 ịkwatu ohu. Ọtụtụ ndị ọzọ na-agba izu nyere aka na-eduga nnupụ-isi n'oge ọgbụgba ọchịchị na antebellum niile. Ọzọkwa, ihe ndekọ akụkọ ihe mere eme na-egosi na ndị ọcha na-akwanyere ike nke ndị njide na-akwanye ugwu, na-ebuli ndị ọrụ a ka ọ dị elu karịa ihe ndị agbụrụ ha nwere ike ịtụ anya inweta n'oge oge ejigide ọtụtụ ndị America America nọ n'agbụ (Anderson 2005) : 86-87). Site na mkpochapu nke onwe, ndị na-eme ọrụ gara n'ihu na-abụ ndị otu a ma ama. Otu ihe atụ dị mkpa dị otú ahụ bụ conjurer nke Samuel C. Taylor dị nso na Tuscumbia, Tennessee. Agbanyeghị na Taylor kwụsịrị igosi nwoke ahụ ọnọdụ ọ bụla ahọpụtara, ọ kwuputara na hoodoo dọkịta bụ onye kachasị nwee mmetụta na mpaghara steeti ahụ (Taylor 1890: 80). Eziokwu ahụ bụ na ndị mmadụ dịka Marie Laveau, Dr. Buzzard, na Caroline Dye na-adị ndụ na ncheta ọbụna taa, ọtụtụ iri afọ mgbe ha nwụsịrị, na-agba akaebe ọkwa nke ndị họọrọ hoodoo dị ka ọrụ.
N’oge gara aga, hoodoo na omume ndị metụtara ya abụwo ihe mmekpa iwu chọrọ. N’ezie, onye amoosu nke e chere na mbụ eboro ebubo na 1692 Salem bụ ohu nke mere ihe enwere ike ịkọwa dị ka ụdị hoodoo mbụ. N'oge antebellum, ụfọdụ ndị nwere ndị ohu nyere aka igbochi hoodoo dị ka isi iyi nke nnupụisi ohu ma ọ bụ onye na-eme ihe ike. N'ezie, ha nwere ezigbo ihe kpatara egwu Dị ụdị ngosipụta a kacha hụ anya pụtara na New Orleans, ebe ndị uwe ojii na-agbasa ememe Voodoo na ihe kpatara na ha bụ nzukọ ndị ohu iwu na-akwadoghị. N’ezie, akụkọ mbụ nke ọtụtụ akụkọ obodo-ukwu banyere okpukpe ahụ zoro aka na ya n’otu isiokwu 1820 nke akpọrọ “Idosị Ego na Ighalo,” nke kọwara nzụkọ nke ụdị nzukọ a. N'otu oge ahụ, ndị ọcha ndị ọzọ gbochiri iwe iwe n'ihi na ha, na-atụ egwu ma ọ bụ kwanyere ike nke ndị na - eme hoodoo (Anderson 2005: 51-52, 56; 86-87; Long 2006: 103-05). Dabere na onye ọkà mmụta aha ya bụ Gladys-Marie Fry, ụfọdụ ndị nna-nna gara n’ihu iji gbaa ndị mmadụ ume ikwere na oke dị ka ụzọ isi jikọọ nkekọ ha site na egwu (Fry 1975: 59-81).
Nwepụ nke ịgba ohu agbachighị hoodoo site na mmegide. N'ime agha afọ mgbe agha obodo gasịrị, ndị ọcha na ndị Afrịka America na-ahụkarị ya dị ka ihe mgbe ochie kachasị echefu echefu. Onye nnọchite anya ihe dị na narị afọ nke iri na itoolu, “amongta Amoosu n’etiti ndị Negroes,” pụtara n’ mbipụta 1872 Akwụkwọ akụkọ Appleton. Enwere ike ịchọta ụda ya n'ụzọ dị mfe site na mmeghe ya, nke na-agụ,
Gburugburu niile dị na South, ebe ọ bụla e kpebirila onye Africa, o buuru ya nkwenye na omume nke agbụrụ a maara dị ka Africa si mara obi, na steeti ndịda niile dị ka ndị na-eme mkpọtụ, ma ọ bụ “aghụghọ.”
N’efu ka okpukpere chi na ndi ocha busoro agha ime ihe ojoo a; ọ ka na-aga n’ihu, isi-hydra, na mgbe nile na akwụkwọ akụkọ na-ewelite mkpu arịrị dịka a na-ewetara ụfọdụ ọmụma ọhụrụ nke ike ya na nsonaazụ diabolical n’ọkụ (Handy 1872: 666).
Ọrụ ụfọdụ gara n'ihu karịa ịgagharị nkwenkwe ndị ahụ, na-ekwupụta ya dị ka isi iyi nke ọrịa mmekọrịta ọha na eze. Nke ahụ bụ ikpe, dịka ọmụmaatụ, na onye ode akwụkwọ ikpeazụ nke narị afọ nke iri na itoolu nke Osisi Negro dị ka onye nweere onwe ya, onye huru hoodoo dika ikike “ime ihe ike” na “aghara ndi agburu a.” N'otu aka ahụ katọrọ conjurers maka nsi (Bruce 1889: 120, 125).
N'ime milieu dị otu ahụ, mmegide gara n'ihu. Agbanyeghị na iwu antebellum megidere ịchịkọta ohu abụrụla nke ugbu a dịka usoro ha kwadobere, na akụkụ ndị ọzọ nke Jim Crow America, nkwenye agbụrụ na-emegharị iji chebe ike n'aka ndị ọcha. N'otu oge ahụ, ọtụtụ ndị na - eme mgbanwe na ndị na - eme iwu na - ahụta onwe ha na - awakpo hoodoo na mbọ ha ichebe ọha na eze. Dịka ọmụmaatụ, na 1891, otu dọkịta rịọrọ arịrịọ dị ukwuu maka Medicallọ Ọrụ Ahụ Ike Florida ka ọ rụọ ọrụ iji belata ihe ọ kpọrọ "mpụ iwu" nke ikwe ka ụmụ nwanyị Africa American na-ele ụmụ. Otu n'ime ihe kpatara ya bụ na ọ na-enwe nchegbu ziri ezi banyere ndụ ụmụ nwanyị na ụmụ aka nke ndị na-amụ banyere ihe ọmụmụ gbasara arụmọrụ na ịmụ nwa. N'otu oge ahụ, o kwuru na ọtụtụ ụmụ nwanyị Afrịka America na-elezighị anya maka ọrụ ha n'ihi na ha dabere na ike karịrị ike sayensị (Neal 1891: 42, 46, 47, 48-49). Otu ọgbọ gasịrị, onye bụbu South Carolina sheriff JE McTeer kọrọ akụkọ banyere mbọ ya na-enweghị isi iji gbaa Dr. Buzzard ikpe maka ịgwọ ọgwụ na-enweghị ikikere (McTeer 1976: 22-25). Na mgbakwunye na ebubo maka ịgwọ ọrịa ezighi ezi, ndị na-eme ihe ahụ na ụlọ ọrụ ndị na-ebubata ngwa ahịa ha site na usoro nzipu ozi kwuru na ha ga-eme mkpesa maka mpụ akwụkwọ ozi, nke ọkà mmụta Carolyn Morrow Long kọwara dị ka "ihe iyi egwu kachasị dị egwu nye onye ahịa ime mmụọ" ( Ogologo 2001: 129). Iji lebara iyi egwu ndị a anya, ọtụtụ ndị na-eme ọrụ kwụsịrị ịkwadebe ọgwụ, ndị ọrụ nke post ahụ malitere ichebe onwe ha site na ịgọnahụ na ha kwuru nkwupụta ọ bụla maka nrụpụta ngwaahịa ha, na-etinye nkọwa na okwu dịka 'ebubo' na aha na nkọwa nke ngwaahịa ha rere. (Anderson 2005: 126).
Mgbalị ịchụpụ hoodoo na ọha America belatara nke ukwuu na afọ ndị na-adịbeghị anya, na mgbalị iji dozie ikpe na-ezighị ezi nke gara aga, ihe odide ndị na-adịbeghị anya banyere hoodoo enyerela aka nabata nnabata ya, na-eleda akụkụ ya dị njọ, dị ka ịkọ ọrịa iji kpatara ọrịa. ma ọ bụ onwu, na ịkọwa conjure dị ka isi ihe dị mkpa ịbụ onye American American. Site na 1930s, mgbe Harlem Renaissance odee Zora Neale Hurston bipụtara "Hoodoo na America" ​​na Lesmụ Nle na Menmụ nwoke, na-akọwa conjure dị ka akụkụ dị mkpa nke ọdịbendị ndị America nke kwesịrị ka e mee ememme, ọtụtụ ndị ọkà mmụta na ndị na-ede akụkọ ifo sụgharịa hoodoo n'ụzọ yiri nke ahụ. Ọ bụ ezie na Hurston dere "Hoodoo na America" ​​maka akwụkwọ ọgụgụ agụmakwụkwọ na Lesmụ Nle na Menmụ nwoke dị ka nchịkọta akụkọ ọdịnala maka ndị na-ege ntị na-ewu ewu, mmetụta mbụ ya kachasị na ngalaba akụkọ ifo. Ọtụtụ ndị edemede, gụnyere gụnyere Alice Walker, Susheel Bibbs, Jewell Parker Rhodes, Arthur Flowers, na Ismail Reed, anabatala hoodoo dọkịta dịka ihe nnọchi anya nnwere onwe nke American American. Ọzọkwa, amụma na uri nke ndị na - ede akwụkwọ akụkọ ifo abụrụla onye ndu kachasị mkpa maka mmụta (Anderson 2019: 69-81). Ihe atụ bụ isi bụ akwụkwọ Katrina Hazzard-Donald nke 2013, Mojo Workin ': Old African American Hoodoo Sistemụ. N'ime ya, ọ na-agbaso nzọụkwụ Hurston, na-atụgharị hoodoo dị ka okpukpe na-ejikọ ndị ojii ojii America na oge gara aga nke Africa. Na mgbakwunye, ọ na-atụgharị uche na ọ bụ ike maka nnwere onwe; jikọtara usoro mgbọrọgwụ ya a kacha mara amara, High John the Conqueror (mbido India ma ọ bụ akara Sọlọmọn mana jalap na-arịwanye elu na-esote ịrị elu nke ụlọ ọrụ na-eweta mmụọ), na Gaspar Yanga, onye ndu Maroon si mpaghara Xalapa, Mexico; ma na-akwado maka hoodoo dị ọcha nke a tọhapụrụ na nrụpụta ọrụ zuru ebe niile kemgbe ngwụsị narị afọ nke iri na itoolu (Hazzard-Donald 2013: 4, 75-77, 179-85).
Agbanyeghị ma mmadụ na-atụgharị hoodoo n'ụzọ dị mma ma ọ bụ na-adịghị mma, ọ ka bụ akụkụ dị mkpa nke akụkọ ihe mere eme na ọdịbendị ndị American America. N'ime afọ ndị gafeworonụ, ọ nọgidere na-abụ ahụmịhe nke ndị American American. Ọzọkwa, ọ bụ ezie na conjure adịghị ebe niile dị ka ọ dị na narị afọ ndị gara aga, o gosipụtaghị ihe ọ bụla na-egosi na ọ ga-apụ n'anya.
Foto # 1: Ememe Vodun nke Tre, Benin.
Onyonyo # 2: Onyinye ndi nwuru anwu na a ulo mgbidi na New Orleans 'St Louis No. 2 Ebe a na-eli ozu.
Image # 3: Ihe ngosi nka nke Eze Alexander, onye n’enye oru hoodoo nke ahote na iri-iteghete. Mara na ihe ngosi a bụ ihe mkparị, nke oge. Juliette A. Owen ma ọ bụ Louis Wain sere nye akwụkwọ Alinaia Owen nke 1893, Old Rabbit, the Voodoo na ndị dibia ndị ọzọ.
Foto # 4: Flọ ahịa F na F Botanica na kandụl, weghaara n'oge narị afọ nke iri abụọ na otu.
Anderson, Jeffrey. 2019. "Echiche Mygha Echiche: Zora Neale Hurston na Mmetụta Ya na Voodoo na Hoodoo Sikolas." Pp. 69-83 n’ime Voodoo, Hoodoo, na Conjure na African American Literature: Critical Essays, nke James S. Mellis degharịrị. Jefferson, NC: McFarland na Companylọ Ọrụ, Inc.
Anderson, Jeffrey. 2008. Hoodoo, Voodoo, na Conjure: Akwụkwọ Nduzi. Westport, CT: Greenwood.
Anderson, Jeffrey. 2005. Conjure na African American Society. Baton Rouge: Louisiana State University Press.
Bacon, M 1895. “jlọ ya na dọkịta.” Ndiife-Lore na Ethnology. Ndị Ọrụ Ndịda 24:193-94, 209-11.
Bass, Rut. 1930. "Mojo: Anwansi Uche Nke Na-aru oru na South Taa." Magazin Scribner 97: 83-90.
Mgbịrịgba, Michael Edward. 1980. Ternkpụrụ, Structure, na Logic na Afro-American Hoodoo Performance. Ph.D. Mpempe akwụkwọ, Mahadum Indiana,
Bruce, Philip A. 1889. Osisi Negro dị ka onye nweere onwe ya: nleba anya na agwa, ọnọdụ, na atụmanya ya na Virginia. New York: Putmụ GP Putnam.
Cable, George Washington. 1886. "Songs Creole Slave." Magazin Century 31: 807-828.
"Izi ozi nke onye ahia na - akwụghị ụgwọ." 1849. Mississippi Free Trader na Natchez Gazette, August 25, p. 2.
Fray, Gladys-Marie. N'afọ 1975. Ndị na-agba ịnyịnya abalị na akụkọ ifo ndi ojii. Knoxville: Mahadum nke Tennessee Press.
Handy, MP 1872. "Amoosu n'etiti ndi Negroes." Akwukwo nke Appleton: Magazine nke Akwukwo Izugbe 8: 666-67.
Hazzard-Donald, Katrina. 2013. Mojo Workin ': Old African American Hoodoo Sistemụ. Urbana: Mahadum nke Illinois Press.
Hurston, Zora Neale. 1935. Males na Nwoke. Philadelphia, PA: JB Lippincott.
Hurston, Zora Neale. 1931. “Hoodoo na America.” Akwụkwọ nke Omenala America 44: 317-417.
Hyatt, Harry Middleton. 1970-78. Hoodoo-Conjuration-chta amoosu-Rootwork. 5 Oke. Memoirs nke Alma Egan Hyatt Foundation. Hannibal, MO: Companylọ ọrụ na-ebi akwụkwọ Western
"Idolatry na Quackery." 1820. Louisiana Gazette, August 16, p. 2.
Johnson, F. Roy. Jim Jim Dr. Fabrọn: Akụkọ nke Conjure. Murfreesboro, NC: Edemede Johnson.
Ogologo, Carolyn Morrow. 2014. "The Cracker Jack: A Hoodoo Drugstore na 'Azụ nke Jazz'." Louisiana Omenala Vistas, Oge opupu ihe ubi: 64-75.
Long, Carolyn Morrow. 2006. Ọhụụ ọhụụ nke Marie Laveau. Gainesville: University Press of Florida.
Long, Carolyn Morrow. 2001. Ndị ahịa ime mmụọ: Religion, Ime Anwansi, na ahia. Knoxville: Mahadum nke Tennessee Press.
McTeer, JE Afọ iri ise dị ka dọkịta amoosu Mba dị ala. Columbia, SC: RL Bryan Company, 1976.
Neal, James C. 1891. “Mmebi iwu ke Florida” ke Usoro ikpe nke Medicaltù Ọgwụ na Ahụ Ike Florida: Oge nke 1891. Jacksonville, FL: Times-Union, 1891.
Owen, Mary Alicia. 1893. Old Rabbit, the Voodoo na ndị dibia ndị ọzọ. Site na mmeghe nke Charles Godfrey Leland na ihe atụ nke Juliette A. Owen na Louis Wain. London: T. Fisher Unwin.
Taylor, Samuel C. 1890. “Dọkịta Hoodoo, 30 Eprel 1890.” Nchịkọta James S. Schoff, William L. Clements Library, Mahadum nke Michigan, Ann Arbor.
Wolf, John Quincy. 1969. "Nwanne nna Caroline Dye: Ndi Gypsy na St. Louis Blues." South Folklore nkeji iri na ise 33, 339-46.